Fijerena Xiaomi Amazift T-Rex: endrika, endrika ary vidiny | Androidsis
Zava-misy fa ny orinasa amerikana miaraka amin'ny Apple Watch dia manjaka amin'ny tsenan'ny smartwatch amin'ny totohondry vy. Na eo aza izany dia manana mpifanandrina marobe hatrany izy. Ary eny, ny mpanamboatra sinoa dia iray amin'ireo mpanohitra lehibe indrindra azy. Tsy vao sambany izahay niresaka momba anao a Fijery Xiaomi, fa ny Amazfit T-Rex vaovao kosa dia manondro ireo fomba hahatongavanao ho iray amin'ireo safidy tsara indrindra raha mitady akanjo azo itokisana ianao, miaraka amin'ny fizakantena tsara ary, ambonin'izany rehetra izany, amin'ny vidiny lafo.
Fantatray fa ny Tokony haseho i Amazfit T-Rex tsy ho ela. Izany dia nilaza fa ny famantaranandro Xiaomi vaovao dia efa zava-misy ary tonga feno antony hahatongavany ho iray amin'ireo smartwtach tsara indrindra amin'ny taona. Mihoatra noho ny zava-drehetra satria izy io dia azo atokisana tsy azo tohaina miaraka amin'ny bateria tsy mety ritra.
Ity ny Amazfit T-Rex, famantaranandro Xiaomi hanjakan'izy rehetra
Ary ny Amazfit T-Rex dia manana andiany fanamarinana ara-tafika izay ahafahany mahazaka ny mari-pana eo anelanelan'ny 40 ka hatramin'ny 70 degre, izay milaza betsaka momba ity fitaovana ity. Ho an'ity, ampio ny fanamarinana fanoherana miaramila 12, ao anatin'izany ny MIL-STD-810G mahazatra efa nolalovan'ny famantaranandro Xiaomi vaovao, ary mazava fa modely mahazaka ny zava-drehetra izy io.
Izany no antony, Famoronana Amazfit T-Rex somary somary maditra noho ny mahazatra izy io. Saingy, tsy maninona na dia mamakivaky ala mikitroka ianao sy ny saha feno lanezy ... Manohana tanteraka ny zava-drehetra ity smartwatch ity. Ary mahazaka ireo mari-pana tafahoatra mihoatra ny 240 ora ireo, ka tsy mila miahiahy na inona na inona ianao. Ary ahoana ny amin'ny bateria? Inona no atao hoe portanto.
Ny orinasa dia mihevitra fa ny fiambenana Xiaomi vaovao Manana 390 mAh izy, mihoatra ny ampy hanohanana hatramin'ny 20 andro nefa tsy andoavam-bola. Ary mitandrema, ity fizakantenan'ny Amazfit T-Rex ity dia misy ny fampiasana ny sensor ny tahan'ny fo amin'ny fotoana rehetra alefa, ny fanaraha-maso ny torimaso, ny fampandrenesana 150 isan'andro, mijery ny famantaranandro 30 heny isan'andro, mampiasa azy mandritra ny 5 minitra ho an'ny asa, firaketana ny fanazaran-tena in-3 isan-kerinandro miaraka amin'ny GPS dia navitrika 30 minitra isaky ny mandeha.
Raha mampiasa azy io milamina kokoa ianao dia mahazo antoka izy ireo 66 andro fahaleovan-tena, izay manazava fa ny batterie an'ny Amazfit T-Rex no tanjany lehibe. Ary mitandrema, raha mampiasa GPS tsy tapaka ianao dia hanana efijery 20 ora miaraka amina sarany tokana, noho izany dia mety amin'ny karazana fanatanjahan-tena rehetra.
Mikasika ny vidiny sy ny datin'ny fandefasana an'ity Amazfit T-Rex ity, hilazana fa efa misy any Chine amin'ny vidiny manodidina ny 103 euro hanovana, misy amin'ny mainty, lavenona, camouflage, maitso ary khaki. Tsy maintsy miandry ny fahatongavany any amin'ireo mpaninjara Espaniôla ianao, satria vahaolana avo lenta io ary tsy handiso fanantenana anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Amazfit T-Rex, ity no famantaranandro Xiaomi vaovao misy fanoherana lehibe sy bateria tsy mety ritra
Ny Xiaomi Mi 9 SE, Mi 8 SE, Redmi Note 7, Note 8 Pro, K20 / Mi 9T dia mandray ny MIUI 11 beta miorina amin'ny Android 10